Canada oo boqolaal Askari u diraysa dalka Yukreen iyo warar kale.
Tuesday January 18, 2022 - 09:06:58
Warbaahinta rasmiga ah ee dowladda Canada ayaa sheegtay in xukuumadda Toronto ay boqolaal askari u dirtay dalka Yukreen ee cadaadiska melleteri ka wajahaya dowladda Ruushka.
Telefeshinka Global News ayaa sheegay in Canada ay quuto katirsan ciidamadeeda ay udirtay wadanka Yukreen waxayna ciidamadaas metelayaan gaashaan buurta NATO ee uu loollanka daran kala dhaxeeyo Ruushka.
ilo wareedyo ayaa sheegaya in dowladda Canada ay tallaabadan qaadday si ay niyadda ugu dajiso dowladda Yukreen oo ka cabsi qabta in duullaan cagmarin ah uu uga yimaad melleteriga Vladimir putin.
Warar kale ayaa sheegaya in ujeedka ciidamadan loo diray uu yahay sidii ay usoo badbaadin lahaayeen diblumaasiyiinta Canadian-ka haddii uu dagaal ka dhaco dalka Canada.
Goorsii horraysay shabakadda CBC ayaa daabacday warbixin ay ku sheegayso in 200 askari Canadian ah ay gaareen Yurkeen ayna tababarro siin doonaan melleetriga wadankaasi.
Dhinaca kale agaasimaha hay'adda sirdoonka Mareykanka ee CIA-da ayaa socdaal qarsoodi ah ku tagay wadanka Yukreen, warbaahinta Ruushka ayaa sheegtay in William Joseph Burns oo ah agaasimaha sirdoonka Mareykanka uu magaalada Kiyeef kula kulmay dhiggiisa dalka Yukreen.
dhammaan dowladaha xubnaha ka ah isbahaysiga NATO ayaa ka walaacsan in Ruushku uu duullaan cagta ku mariyo Yukreen.
Wararkii ugu dambeeyay ee doorashada madaxweynaha DF-ka [Warbixin].
Sawirro: Roobab dabeyllo wata oo ka da'ay bartamaha dalka Soomaaliya.
13 Askari Itoobiyaan ah oo ku dhintay weeraro ka dhacay duleedyada Xudur iyo Baydhabo.
Ciidamo Itoobiyaan ah oo lagu weeraray Buurhakaba iyo Waajid iyo warar kale.